फेसबुक बाटै बन्द को विरोध [Friday Tech]
Aakar May 07, 2010
माओवादी को आमहड्ताल लम्बिँदै जाँदा, फेसबुक जेनेरेसन ले, फेसबुक कै माध्यमबाट बन्द को विरोध मा आवाज उठाइरहेकाछन् । यही फेसबुक कै आवाजहरु, टिभि, रेडियो, पत्रपत्रिका, वेव र ब्लग मार्फत अधिकांशको कान सम्म पुगिरहेको छ ।
फेसबुक मा, बन्द को विरोधमा ग्रुप र फ्यान पेजहरु प्रशस्तै खोलिएका छन् । फेसबुक बन्दकर्ताहरुलाई गाली गर्न र विरोध गर्न को लागि मात्र सिमित रहेन । आज वसन्तपुर मा भएको शान्ति र्याली मा फेसबुक बाटै धेरै ले खबर थाहा पाए । फेसबुक मार्फत नै, आफ्नो उपस्थिति को मात्र जानकारी दिएनन्, फेसबुक जेनेरेसन राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै वसन्तपुर पुगे । मोबाइल, ल्यापटप मार्फत पलपल का गतिविधिहरु संसार सामु अपडेट गरिरहे । यो पक्कै पनि एउटा भिन्न र सफल अभ्यास थियो, नेपाली नेटिजनहरु को, शान्ति को पक्षमा ।
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुक र ट्विटर मा बन्द का विरुद्ध आवाजहरु गुन्जिरहेकाछन् । पलपल मा नयाँ ग्रुप र फ्यान पेजहरु बनिरहेकाछन् । अनि प्राय: सबै नेपाली फेसबुक प्रयोकर्ता को फेसबुक मा कतै न कतै यही बन्द ले ठाउँ पाएको छ । मैले देखेको पेजहरु मध्ये मा कमैले मात्र बन्द को समर्थन गरेका छन्, अधिकांश नेटिजनहरु बन्द को विपक्ष मा छन् ।
Peace Rally to oppose Nepal Bandh - STILL ON भन्ने फेसबुक ईभेन्ट पेज मा हालसम्म २७ सय भन्दा बढि ले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेकाछन् । उनीहरुले त्यहाँ उपस्थिति मात्र जनाएनन्, काठमाडौँ मै हुने नेटिजनहरु सबै र्याली मा उपस्थित भए । त्यस्तै FNCCI, Nepal chamber of commerce, PAPAD & other non political organizations are going to organizeapeace really to oppose the Bandh on May 7th Friday from basantapur at 9AM. Please joing the rally with your family and friends to show support. भन्ने मा १४ सय बढि ले आफ्नो उपस्थिति जनाएकाछन् भने Peace Rally नाम को ईभेन्ट मा करिब ३०० जना जति ले आफ्नो उपस्थिति जनाएकाछन् । फेसबुक को माध्यमबाट नेपाल मा पनि, यसरी हजारौँ ले सहभागिता जनाउनु ले नेपाली नेटिजनहरु फेसबुक मा झुन्डेर बस्ने मात्र नभइ, परिआउँदा सडक मै ओर्लिँदारहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । स्मरणीय रहोस्, यी कुराहरु रमाइलो या टाइम पास को लागि गरिएको थिएन, फेसबुक मा सहभागिता जनाउने अधिकांशहरु वसन्तपुर मा पैदलै हिँडेर उपस्थित भएका थिए । माइक्रोसफ्ट नेपाल का एमएसपिहरु पनि, माइक्रोसफ्ट नेपाल को अगुवाइ मा शान्ति र्याली मा उपस्थित भएका थिए । शान्ति र्याली मा सहभागीहरु ले नेपाल को रा्ष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेका थिए । सबै जना स्वतस्फुर्त रुप मा र्याली मा सहभागि भएका थिए ।
फेसबुक का पेज तथा ग्रुपमा नेटिजनहरु आ-आफ्ना रिस पोखिरहेकाछन् । सरकार र माओवादी दुवै देखि रुष्ट देखिएपनि, मुख्यत: सबैको आवाज बन्द को विरुद्ध केन्द्रित रहेको छ । बधाइ तथा धन्यवाद छ, नेपाली फेसबुक जेनेरेसनलाई !!! बन्द को विरोध फेसबुक बाटै !!!
ट्विटर मा ट्विट गरिएका आज का शान्ति र्याली का केही फोटोहरु:
1st and 2nd photo by: Ujjwal Acharya & 3rd,4th and 5th photo by: Dinesh Wagle
archana May 7, 2010 at 12:49 PM
Unknown May 7, 2010 at 1:14 PM
अब त अत्ती भयो । मैले पनि ब्लगबाटै विरोध सुरु गरें ।
छिटो जानकारी र तस्बिर सहितको अपडेटको लागि आभार !
Bibek Adhikari May 7, 2010 at 11:02 PM
यो पोष्ट पढुन्जेलसम्म बन्द फिर्ता हुने खबर आएको छ। भोलीदेखी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्छन् रे हेरू के हुन्छ ?
sangesh May 7, 2010 at 11:21 PM
Facebook and SMS had helpedalot to make this rallyahuge sucess i guess :)
Dilip Acharya November 12, 2010 at 4:06 AM